विश्वप्रकाश शर्माको ‘ऐना’ माघ ७ गतेबाट कान्तिपुर टिभीबाट प्रसारण हुने - Limbuwan khabar
विश्वप्रकाश शर्माको ‘ऐना’ माघ ७ गतेबाट कान्तिपुर टिभीबाट प्रसारण हुने
बिहिबार, ०२ पुष, २०७७ रातीको ०९:४७ बजे, लिम्बुवान न्युज
झापा। द होराइजन मल्टिमिडियाले निर्माण गर्ने सामाजिक विषयवस्तु माथिको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘ऐना’ माघ ७ गतेदेखि प्रसारणमा आउने भएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कार्यक्रम ‘ऐना’ विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइयो । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ऐना २६ अंकको रहने छ । एक घण्टा समयावधिको कार्यक्रम ऐना कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हरेक बुधबार राति ९ बजे प्रसारण हुनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम ऐनाको शीर्ष गीत समेत सार्वजनिक भयो । देशका अधिकांश भूभागमा पुगेर विभिन्न सामाजिक घटनाका पात्रहरुलाई भेटी छायांकन गरिएको गीतमा मानवीय संवेदना र प्राकृतिक सुन्दरतालाई समेटिएको छ । चर्चित कवि श्रवण मुकारुङले रचना गरेको शीर्ष गीतमा सुगम पोखरेलको स्वर र मोहित मुनालको संगीत छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम ऐनाले समेट्ने विषयलाई छोएर शिल्पी थिएटरको समूहले नाटक समेत मञ्चन गरेको थियो ।
कार्यक्रम ऐनाका प्रोजेक्ट हेड राधाकृष्ण धितालले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सामाजिक र मानवीय मुद्दामा जोड्नुका साथै समाजका विविध घटनासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराउन पनि विश्वप्रकाश शर्मालाई कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा आग्रह गरिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रस्तोता शर्माले समाजका विविध घटनाको गहिराइमा पुगेर मानवीय संवेदनालाई छुनेगरी तयार भइरहेको कार्यक्रम ऐनाको हिस्सा बन्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताए । शर्माले सामाजिक मुद्दाका सवालमा देशमा दुईवटा चित्र रहेको र त्यसलाई ऐनाले छर्लङ्ग देखाउनेमा आशावादी रहेको बताए । देश विकासको कुरा गर्दा भौतिक विकास र व्यवस्थामा परिवर्तन आउने तर समाजका मुद्दा ज्यूकात्यूँ रहने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफू राजनीतिक जिम्मेवारीको हैसियतले कतिपय सवालमा जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा रहे पनि यो कार्यक्रम मार्फत् समाजका विविध सवालमा प्रश्न गर्न आइपुगेको औंल्याए ।
कार्यक्रम ऐनाको मुख्य प्रायोजन ग्लोबल आइएमई बैंकले गरेको छ भने सहप्रायोजनमा चौधरी फाउन्डेसन र आइएनजी ग्रुप छन् । पत्रकार सम्मेलनमा ग्लोबल आइएमई बैंकका डेपुटी सिइओ महेशप्रसाद ढकालले सामाजिक विषयलाई गहन अध्ययन गरेर तयार हुने कार्यक्रम ऐनाको मुख्य प्रायोजक हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता गम्भीर कार्यक्रमहरुमा बैंकको साथ र सहयोग जारी रहने जानकारी दिए । यस्तै, चौधरी फाउन्डेसनकी डेपुटी जेनरल म्यानेर मेरिना रञ्जितले कार्यक्रम ऐनाले समाजलाई उज्यालो तर्फ लैजानेमा आशावादी रहेको बताइन् ।
समाजमा भइरहेका अमानवीय घटना, विभेद, अन्याय, अपराध, अपमान, असावधानी, रुढीवादी परम्परा–सोच आदिले किन मान्छेलाई मान्छे बन्न दिइरहेको छैन? के हो त्यसको जड? देशका विभिन्न स्थानमा घटनास्थलमै पुगी र पीडित वा सरोकारवालाहरुलाई भेटेर तथा स्टुडियोमा छलफल गरेर यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम कार्यक्रम ’ऐना’ले गर्नेछ ।
कार्यक्रम ऐनाको निर्देशन अमनप्रताप अधिकारीले गर्नेछन् । कार्यक्रमको प्रोड्युसर जनक पौडेल हुन् भने अनुसन्धान प्रमुख प्रकाश लामिछाने र स्क्रिप्ट राइटर आन्विका गिरी हुन् । यस्तै, कार्यक्रमको अनुसन्धान टिममा भानु बोखिम, महाविर विश्वकर्मा, मनिका खतिवडा र लक्ष्मी नेपाल छन् । कार्यक्रम ऐनाको स्टुडियो बालाजुस्थित नेपाल चलचित्र बोर्डको हलमा तयार भएको छ । (प्रतिदिन दैनिकबाट)